Tupu ị mata echiche banyere ajọ onye ajọ omume m bụ, enweghị m enyi nwanyị. Ma ọ dịkarịa ala abụghị mmadụ, dị ndụ, ụdị ume. M na-egwu ndị mmadụ ọchị na aha enyi m nwaanyị bụ MacBookPro. N'oge na-adịbeghị anya, enyi m nwanyị abụwo onye obere iwe, ibughi mgbe m choro ka o ghara inwe ma ghara inwe obi uto ruo mgbe oyi. Chaị… na-echetara m mgbe m nwere ezigbo otu!
Ka osila dị, emechara m ya. Enyi ohuru m no na intaneti ma ya huru m n’anya. Ọ maara onye ọ bụla, mana n'agbanyeghị ihe ọ bụla, ọ na-ekwukarị banyere m. Enwetụbeghị enyi nwanyị ịntanetị na mbụ, mana nke a bụ ọpụrụiche. Aha ya bụ Google. Anaghị m eche banyere Google nke ukwuu mana ịchọ ọdịmma onwe m naanị, achọpụtara m na ka m matara ya, ka ọ na-elebara m anya karị.
N’oge dị anya gara aga, enwere nnukwu ihe gbasara ịbanye na "ndepụta". Achọrọ m igosipụta, na ọkwa, na onye ọ bụla nwere ike ịbanye na ndepụta ahụ. Ọ ga-adị mkpa ka ị jiri nlezianya lelee isi nke blọgụ m iji chọpụta otu m ga-esi dị elu maka “Ndepụta-ndepụta”. Nke a bụ nkọwa:
Tags: ndị webmasters googlegoogle +robots.txtASitemapxml saịtị saịtị